GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ì nwere ike icheta otu ụbọchị ị nọ na-agba ọsọ mgbe ị dị obere, daa, merụọ ahụ́ n’aka ma ọ bụ chihịa ikpere gị? Ì chetara otú mama gị si gụgụọ gị, hichaa ọnyá gị ma kee ya ákwà? Ka ị nọ na-ebe ákwá, ya ekuru gị, na-asị gị ndo. Obere oge, gị enwetatụ onwe gị. N’oge ahụ ị dị obere, ihe mee gị, a ga-enwerịrị onye ga-abịa gụgụọ gị.
Ma ihe na-agbanwe ka anyị na-etolite. Nsogbu anyị na-akakwu njọ. Ọ na-esikwa ike ịhụ onye ga-akasi anyị obi. Nsogbu anyị na-enwe mgbe anyị torola anaghị abụkarị ụdị nke mama anyị ga-ekuru anyị, kee anyị ákwà, anyị enweta onwe anyị. Ka anyị lee ụfọdụ n’ime nsogbu ndị ahụ.
Ò nwetụla mgbe a chụrụ gị n’ọrụ, ya adị gị ka nke ị na-eme agwụla? Otu nwoke aha ya bụ Julian kwuru na obi gbawara ya mgbe a chụrụ ya n’ọrụ. O bidoro na-eche otú ọ ga-esi elekọta ezinụlọ ya. Ọ nọkwa na-ajụ onwe ya ihe mere ụlọ ọrụ ha ji chụọ ya n’ọrụ n’agbanyeghị na ya ji obi ya niile na-arụrụ ha ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ.
O nwere ike ịbụ na obi gbawara gị mgbe gị na di gị ma ọ bụ nwunye gị gbasara. Otu nwaanyị aha ya bụ Raquel kwuru na iwe juru ya obi mgbe di ya hapụrụ ya ihe dị ka otu afọ na ọnwa isii gara aga. O kwuru, sị: “Obi gbawara m, ahụ́ ana-egbukwa m mgbu. Ihe a niile mere ka ezigbo ụjọ jide m.”
Ị̀ na-arịa ọrịa na-achọghị ịla ala? O nwere ike ịna-adị gị mgbe ụfọdụ otú ọ dị Job mgbe ọrịa ji ya aka ọjọọ. Job kwuru gbasara ndụ ọ dị, sị: “Ajụwo m ya; agaghị m adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.” (Job 7:16) O nwekwara ike na-adị gị otú ọ dị otu nwoke aha ya bụ Luis. Nwoke a akarịala afọ iri asatọ, ya na ọrịa na-alụkwa. O kwuru, sị: “Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị m ka ọnwụ bịa gburu m.”
O nwekwara ike ịbụ na mmadụ nwụnahụrụ gị, gị ana-achọ onye ga-akasi gị obi. Otu nwoke aha ya bụ Robert kwuru otú obi dị ya mgbe ụgbọelu nwa ya nwoke nọ na ya kpọkara, nwa ya ahụ anwụọ. O kwuru, sị: “Ọ dịcha m ka ọ̀ bụ ná nrọ. Obi gbawara m, ya ana-adịkwa m ka onye a manyere ogologo mma agha n’ahụ́ otú ahụ Baịbụl kwuru.”—Luk 2:35.
Robert, Luis, Raquel na Julian mechara nweta Onye kasiri ha obi. Ọ bụ Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile. Olee otú Chineke si akasi mmadụ obi? Ọ̀ ga-akasi gịnwa obi ma nsogbu bịara gị?